“ ငါအချိန်ပြန်ပြောင်းနိုင်ရင်”: DOJ နှင့် In-House Units | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » "ငါသည်အချိန်ကိုပြန်ဖွင့်နိုင်ပါလျှင်": DoJ နဲ့ In-အိမ်ယူနစ်
2017 NAB ပြရန် အယ်ဒီတာ့အာဘော်တင်ပြမှု
အဆိုပါ တစ်ဦး DoJ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏သတင်း ကြော်ငြာအေဂျင်စီ In-အိမ်သူအိမ်သားထုတ်လုပ်မှု / post ကိုယူနစ်သို့မကြာသေးမီကကြီးတွေသတင်းဖြစ်ပါသည် - မကြားဘူးသောသူတို့အဘို့, ဒုက္ခကြော်ငြာအေဂျင်စီစွပ်စွဲသူတို့အိမ်၌-In သို့မဟုတ် In-ကွန်ယက်ကိုမှတဆင့်သူတို့ကို undercut နိုင်ရန်အတွက်ရောင်းချသူထံမှစစ်ဆေးမှုများလေလံစုဆောင်းနေကြသည်ကြောင်း အုပ်စုများ။ သင်တန်း၏အေဂျင်စီများထုတ်လုပ်မှုစရိတ်အဘို့မိမိတို့ client များ '' စစ်မှန်တဲ့အစာအိမ်ထဲသို့ သာ. ကြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသည်နှင့်လွတ်လပ်သောဆိုင်များထက်စျေးနှုန်းချိုသာကြွလာတော်မူရန်ဤသတင်းအချက်အလက်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ယင်းသိသူမည်သူမဆိုအတွက်အဘို့, ဒီထောငျ့မဟုတ်ပါဘူး - ဒါဟာအသက်လမ်းဖြစ်ရဲ့။
ငါ "အဘယျသို့ကယ့်ကိုကြီးမားတဲ့သဘောတူညီချက်င်?" မေးဖို့အဆုံး client ကိုမှတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုသည်ဤကြီးမားသောအေဂျင်စီများသူတို့ရဲ့ပင်ပိုကြီးကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီ clients များနှင့်အတူရှိသည်မဟာဗျူဟာမြောက်အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ မဟာဗျူဟာအားသာချက်ခွင့်ကောင်းတစ်ခုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်ကိုအကြောင်းကားအဘယ်သို့နည်း တစ်စူပါရှုပ်ထွေးသော, စူပါစျေးကြီးနှင့် Multi-သန်း-ဒေါ်လာစျေးငရဲမီးနဲ့ Flame အစုံအတွက်အကြောင်းအရာဖန်တီးရန်စူပါနယ်ပယ်စွမ်းရည်အပေါ်တစ်ဦး deft အာရုံစိုက်: တစ်ရှည်လျားသော-စဉ်အဘို့, post ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသူတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အားသာချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ကောင်းပြီကျနော်တို့အားလုံးဒီအတိတ်-တင်းမာနေကြေညာချက်သိအဖြစ် - ။ တခါသာ High-end ဆိုင်များမှဓာတ်များကိုဆော့ဖျဝဲကိရိယာများ, ကို set up ရန်လွယ်ကူလုံးဝခရီးဆောင်ဖြစ်ကြပြီး 50k ထက်အဆများစွာလျော့နည်းအေဂျင်စီများနှင့်၎င်းတို့၏ clients များအားလုံးကိုအပြည့်အဝလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့နိုင်ကြသည် ဤအမှုစနစ်များအတော်လေးအလွယ်တကူ။ အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်အားသာချက်တစ်ချိန်ကခဲ့မှုမရှိတော့ပါ။ လွင်ပြင်နဲ့ရိုးရိုး: အ Gig တက်သည်နှင့်အဘယ်သူမျှမ DoJ စုံစမ်းစစ်ဆေးအချိန်ကိုပြန်ဖွင့်ဖို့လုံလောက်တဲ့အစွမ်းထက်သည်။ လေလံ Check သို့မဟုတ်မတစ်ဦးအေဂျင်စီပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းအကြောင်းအရာစျေးနှုန်းချိုသာထုတ်လုပ်ရန်သူတို့ရဲ့စကေးမူတည်ပြီးနိုင်လျှင်, သူတို့ကလုပ်ပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်။
နေ့ရက်ကာလ, သင်သည်ကိုက်ညီ titling နှင့်နောက်ခံအချို့ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများကိုတက်သန့်ရှင်းရေးအတွက် $ 800 တစ်နာရီစေနိုငျသောစိတ်ကူးပေါ်လုံးဝဆောက်လုပ်ထားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ရေတွက်နေကြသည်။ ဒါကြောင့်ရှေးရှေးကြာမြင့်နေချိန်တွင်ဒါဟာပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်နေရာတည်းမှာဆိုင်များနှင့်နေဆဲအလုပ်လုပ်ကြဘူးနိုင်သောမော်ဒယ်များများအတွက်ရှာဖွေရေး၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လူတွေပြုပါ - သင်ပိုမိုလုပ်ဖို့ရရှိပါသည်။
ငါသည်အခြားသောသူတို့အားအဖြစ်ကောင်းစွာတည်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ Mid-To-ရှုပ်ထွေးအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု Creating အိမ်သူအိမ်သားအေဂျင်စီများသို့မဟုတ် client ကိုဘက်ယူနစ်အတွက်ရိုးရှင်းစွာအဘို့အအစာအိမ်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပေတစ်ခု All-In အဆိုပြုဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာထားပါ - ကနက်ရှိုင်းသောကတိကဝတ်ပါပဲ။ ဒါဟာအားလုံးကွပ်မျက်ခြင်းနှင့်ရူပါရုံကိုဆောင်ခဲ့စဉ်အတူတူကအားလုံးကိုဆွဲထုတ်ဖို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ကာကွယ်အကြီးတန်းအနုပညာရှင်တွေအတွေ့အကြုံရှိစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဝသကဲ့သို့ကောင်းစွာအဖြစ်အလေးအနက် codebase ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ပါပဲ။ သေချာတာပေါ့, သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်ဤအချက်များကိုရှောင်နိုင်ပါလိမ့်နှင့်တော်တော်လေးကောင်းသောကြည့်တချို့ပစ္စည်းပစ္စယစေ ... သို့သော်သင်ဖြစ်ကောင်းကလုပ်နေတာကသင်၏အဖွဲ့သည်ထွက်ကိုမီးရှို့ခြင်းငှါ, ။ တသမတ်တည်းကြီးမြတ်ရလဒ်များကိုအတူအထပ်ထပ်ပို့, တစ်နှစ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်မပါသေးငယ်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ဖြစ်ပါတယ်, တကချစ်ခြင်းမေတ္တာကိစ္စင်။ သငျသညျတစ်ချိန်တည်းမှာ dabble နှင့်အောင်မြင်ရန်လို့မရပါဘူး။
ရှာဖွေရေးအတွက် VFX ဖန်တီးသူများအတွက်လျောက်ပတ်နှင့်ပြန်လုပ်အနားသတ်ပေးစဉ်နှစ်ဦးစလုံးအေဂျင်စီများနှင့်အဆုံး clients များပိုကြီး VFX အိမ်၏ဖန်တီးမှုစွမ်းရည်သို့အသာပုတ်နိုင်သည်ရှိရာတစ်ဦး, တတ်နိုင်ချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မော်ဒယ်ပေါ်သည်။ မိတ်ဖက်၏ဤအမျိုးအစားအနာဂတျအတှကျအစိုင်အခဲအစီအစဉ်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်သူများပေးနေချိန်မှာပြည်သူများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကသူတို့မူထူးခြားတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရေးရာကိုအာရုံစိုက်ဖို့ခွင့်ပြု, ညီမျှခြင်း၏အားလုံးနှစ်ဖက်အကြိုးရှိနိုငျပါသညျ။
ငါအဟောင်းတွေများအတွက် pining မဟုတ်, 2017 မော်ဒယ်သစ်ထွက်လှိမ့်ရာနှစ်စေရန်စီစဉ်။
ယခင်: ထောက်လှမ်းရေးလက်ထောက် Artificial, မလုပ်ခဲ့ပြီးနေ
နောက်တစ်ခု: ရီနည်းပညာနှင့် Google NAB 2017 မှာ Yi ရောင်ခြည်တော်စက်ဝန်းမိတ်ဆက်